Ny #PodcastApple 8x22 dia mivoaka izao. IPhone 8, MWC ary tsaho maro hafa | Avy amin'ny mac aho
Ny #PodcastApple 8x22 dia mivoaka izao. Tsaho momba ny iPhone 8, MWC ary maro hafa
Herinandro iray hafa dia te-hizara aminareo rehetra ilay podcast izay nalefanay mivantana isaky ny alina - vao maraina - ny talata. Ka raha iray amin'ireo tsy afaka manaraka anay mivantana eto ianao dia avelanay ao amin'ny YouTube ny lahatsarin'ny fantsona ary koa ny rohy mankany amin'ny podcast izay azonao henoina avy amin'ny mpilalao podcast tianao indrindra. Mba haminavinaana zavatra momba ny zavatra noresahina tamin'ny mpiara-miasa amin'ny Actualidad iPhone dia holazainay fa tamin'ity herinandro ity dia nisy tsaho vitsivitsy. momba ny ho avy iPhone 8 na fanontana "faha-XNUMX taona" miaraka amin'ny efijery OLED mety misy sy ny famandrihana tsy misy tariby, ankoatry ny fanombohana ny fanenjehana voalohany ny zavatra miandry antsika ao amin'ny MWC any Barcelona sy ny antsipiriany maro hafa amin'ny tontolon'ny Apple.
Avelanay eto ny horonantsary YouTube izay ahitanao anay mivantana omaly alina na hitadiavana anay amin'ny mpilalao podcast tianao ary hisoratra anarana:
Raha ianao dia iray amin'ireo mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny fantsona iTunes aza miandry intsony dia ataovy. Ary raha tianao dia azonao atao koa ny manao toy izany ao amin'ny Fantsona YouTube mba hahazoanao fampandrenesana amin'ny fotoana hanombohantsika ireo seho mivantana. Azonao atao ihany koa ny manaraka anay amin'ny tambajotra sosialy ary mizara ny hevitrao, ny fanontanianao na ny soso-kevitrao amin'ny fotoana rehetra, eken'ny ekipa PodcastApple hatrany izany. Aza adino fa afaka mampiasa ny tenifototra #podcastapple ankoatry ny fantsona sisa, tambajotra sosialy sy ny hafa, izay ahafahanao mifandray aminay.
Ankafizo ny podcast!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny #PodcastApple 8x22 dia mivoaka izao. Tsaho momba ny iPhone 8, MWC ary maro hafa
Nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny Facebook fa miasa amin'ny fampiharana ho an'ny Apple TV mifantoka amin'ny horonan-tsary izy
Ny mpamorona ny Twitterrific ho an'ny iOS, dia mandefa fanentanana ao amin'ny Kickstarter hamorona ny fampiharana ho an'ny MAC